AddEvent: Tinye na Ọrụ Kalinda maka Weebụsaịtị na Akwụkwọ Akụkọ | Martech Zone
AddEvent: Tinye na Kalinda Ọrụ maka Weebụsaịtị na Akwụkwọ Akụkọ
Wenezdee, Machị 17, 2021 Monday, May 16, 2022 Douglas Karr
N'oge ụfọdụ, ọ na-abụkarị ọrụ kachasị mfe na-eme ka ndị mmepe weebụ nwee isi ọwụwa. Otu n'ime ndị ahụ dị mfe Tinye na kalenda bọtịnụ ị na-ahụ na ọtụtụ saịtị na-arụ ọrụ n'ofe isi kalịnda mmemme na ntanetị yana site na ngwa desktọọpụ.
N'amamihe na-enweghị ngwụcha ha, nyiwe ihe jikọtara onwe ha ekwenyeghi n'ụkpụrụ na-ekesa nkọwa omume; n’ihi ya, kalenda ukwu ọ bụla nwere usoro nke ya. Apple na Microsoft nakweere .ics faịlụ dị ka usoro file faịlụ ederede doro anya na nkọwa dị na ya. Google, dị ka ọrụ ntanetị, na-eji API iji hazie ozi mmemme.
Kedu ihe bụ ICS Format
Ntanetị lendntanetị na ịhazi usoro isi ihe dị iche iche bụ ụdị mgbasa ozi nke na-enye ndị ọrụ ohere ịchekwa na ịgbanwe data ịghakọ na ịhazi usoro data dịka mmemme, ndozi, akwụkwọ akụkọ, yana ozi n'efu / na-arụsi ọrụ ike. Faịlụ ndị a haziri dị ka nkọwapụta na-enwekarị ndọtị nke .ics.
Tinye bụ nnukwu obere ọrụ na - ewepụta koodu dị mkpa na faịlụ iji tinye ma ọ bụ denye aha na kalenda Apple, kalenda Google n'ịntanetị, Outlook, Outlook.com, yana Yahoo! kalenda. AddEvent na-enye ma ngwaọrụ dị n'ịntanetị yana API iji hazie njikọ na bọtịnụ Kalinda gị na bọtịnụ ọ bụla ịchọrọ.
TinyeEvent Nhọrọ na Ngwaọrụ Gụnye
Tinye na bọtịnụ Kalinda (maka weebụsaịtị) - ụzọ dị ngwa na enweghị ike maka ndị ọrụ gị ịgbakwunye ihe omume gị na kalenda gị. Mfe iji wụnye, asụsụ anaghị anọpụ iche, oge mpaghara yana DST dakọtara. Na-arụ ọrụ zuru oke na ihe nchọgharị ọ bụla, mbadamba, na ngwaọrụ mkpanaka.
Ndenye aha Kalinda (otutu ihe) - were tinye otutu ihe na kalenda onye ọrụ gị site na ịdenye kalịnda ị mepụtara. Nwere ike ịgbanwe mgbanwe na kalenda gị, a ga-egosipụta mgbanwe ahụ na kalenda nke ndị debanyere aha gị niile.
Ihe (maka akwụkwọ akụkọ na nkekọrịta mmekọrịta) - mee ka ndị ọrụ tinye ihe omume gị na kalenda ha n'agbanyeghị ebe ha na-amụta banyere ha - ọ bụrụ akwụkwọ akụkọ, mgbasa ozi mmekọrịta dị ka Facebook ma ọ bụ Twitter, ma ọ bụ ngwá ọrụ mgbasa ozi dịka Mailchimp, Marketo, ma ọ bụ Salesforce. Ngwa mmemme nke AddEvent na-eme ka ọ dị ngwa na enweghị mgbu maka ịmepụta mmemme nwere ibe ọdịda nke ya nke ị nwere ike kesaa na mgbasa ozi ọha, ma ọ bụ jiri dị ka njikọ na akwụkwọ akụkọ na ngwa mgbasa ozi.
Direct URL Usoro (na API's) - njikọ enwere ike ịhazi ya maka imepụta ihe omume, ma ọ bụ zipụ ndị ọrụ gị na ọrụ kalenda ha ebe ha nwere ike itinye ihe omume gị, ma ọ bụ tinye mgbakwunye ihe omume gị na ozi ị na-ezigara ndị ọrụ gị .
Ọ bụ obere ikpo okwu siri ike, dị mfe ma baa uru nke na-enyere ndị na-edebanye aha gị na ndị ọrụ azụmahịa aka. Ma ị na-ewu ikpo okwu ma chọọ ọrụ mgbakwunye-na-kalenda ma ọ bụ ọ bụrụ na ị bụ naanị azụmahịa na-ekesa ihe ncheta ihe omume maka mmadụ niile, AddEvent bụ nnukwu ikpo okwu. Ha na-enye:
Kalenda - kalenda a na-atụnye ego, kalenda ndenye aha, na ọrụ nnakọta data niile n'otu n'otu. Dị ka kalenda nwere ike itinye aka, ọ na-eme ka mmemme gị nwee mmekọrịta enyi na enyi maka ndị ọrụ gị site na ịnye ha kalenda n'ezie iji lelee na weebụsaịtị gị. Dị ka kalenda ndenye aha, ọ na-enye ndị ọrụ gị ohere itinye ihe omume gị na kalenda ha n'ụzọ dị mfe ma na-eme ọhụhụ maka mgbanwe omume ọ bụla (dịka ngwa Kalinda Ndenye aha, n'agbanyeghị na ị nwere nhọrọ na nyocha miri emi)
Nchịkọta - Sochie ngosi, omume-agbakwụnye, kalenda ndị debanyere aha, na ndị ọzọ. Nchịkọta na-enye data bara uru gbasara gị kalenda na ihe omume kere site na Dashboard ma obu Kalịnda & Ihe Omume API.
Gbalịa Tinye maka ego n'efu
ngosi: Martech Zone na-eji njikọ mmekọ na edemede a.
Tags: tinye na kalendatinye na njikọ kalendaOnyemakalenda apụlkalenda APIndenye kalịndakalenda Xkalenda embeddableomume ọdịda peejiihe omumekalenda googlemailchimpahịakalenda ele ihe anyakalenda outlook.comndị ahịakalenda ndenye ahakalenda yahoo
Nghọta: Otu esi aga More B2B na-eduga na LinkedIn Sales Navigator